Vaovao - Tsenan'ny metionine mitsivalana amin'ny faritra ambany
Tsenan'ny metionine mitsivalana amin'ny faritra ambany
Ato ho ato, ny tsenan'ny methionine dia niasa tao anatin'ny faritra ambany tantara, ary nidina farany teo izy. Ny vidiny ankehitriny dia RMB 16.5-18 / kg. Navoaka tsikelikely tamin'ity taona ity ny fahafaha-mamokatra vaovao. Be ny famatsian-tsena ary mihodina ny ambany. Nidina hatramin'ny 1.75-1.82 euro / kg ny teny nataon'ny tsena eropeana. Voakasiky ny vidin'ny fifanakalozana malemy sy ny fitomboan'ny famokarana an-trano, ny fidiran'ny methionine dia nihena tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jolay 2020, dia nihena 2% isan-taona ny fanafarana methionine tanindrazako
Raha ny antontan'isa momba ny fadin-tseranana, tamin'ny volana jolay 2020, ny fireneko dia nanafatra vokatra 11 600 taonina henjana methionine, fihenan'ny isam-bolana 4.749 taonina, fihenan'ny 9614.17 taonina isan-taona, fihenan'ny 45,35%. Tamin'ny volana jolay 2020, ny fireneko dia nanafatra 1 810 taonina avy amin'ireo ozinina Maleziana, fiakarana 815 taonina isam-bolana ary fihenan'ny 4 813 taonina isan-taona. Tamin'ny volana jolay, ny fanafarana ny fireneko avy any Singapour dia nihena be tamin'ny 3340 taonina, ny iray volana isam-bolana dia 4840 taonina ary ny fihenan'ny 7.380 taonina isan-taona.
Nanomboka tamin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Jolay 2020, ny fanafarana methionine tanindrazako dia nahatratra 112 400 taonina, nihena 2,02% isan-taona. Ny firenena telo voalohany dia i Singapore, Belzika ary Malezia. Anisan'izany, ny fanafarana avy any Singapour dia nitana ny ampahany betsaka indrindra, niaraka tamin'ny fanafarana 41.400 taonina, mitentina 36,8%. Nanaraka an'i Belzika, ny habetsahan'ny fanafarana mitombo hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Jolay dia 33 900 taonina, fitomboana 99% isan-taona. Ny habetsahan'ny fanafarana ampiarahina avy any Malezia dia 24100 taonina, nihena 23,4% isan-taona.
Manohy mamoy vola ny indostrian'ny akoho amam-borona
Rehefa miha tratry ny valanaretina satro-boninahitra vaovao ny fanitarana ny indostrian'ny akoho, dia kamo ny fahombiazan'ny fiompiana akoho. Tamin'ity taona ity, niaritra fatiantoka nandritra ny fotoana maro ny tantsaha. Ny salan'isan'ny akoho broiler ara-barotra dia 3.08 yuan / kg, midina 45,4% isan-taona ary 30% isan-taona. Ny valan'aretina tazo afrikana dia voafetra ny toerana fanjifana ary ny fitomboan'ny fangatahana tsena. Tsy ny akoho amam-borona sy atody ihany no very vola, fa ny gana gana koa tsy be fanantenana. Vao tsy ela akory izay, Feng Nan, sekretera jeneralin'ny sampana indostrian'ny akoho amam-borona ao amin'ny Fikambanan'ny mpiompy omby Shandong, dia nilaza fa ny isan'ireo gana eo amin'ny indostrian'ny gana eto amin'ny fireneko dia eo anelanelan'ny 13 tapitrisa ka hatramin'ny 14 tapitrisa, izay nihoatra lavitra ny fifandanjan'ny famatsiana sy ny tinady . Ny fihoaram-pefy tafahoatra dia nahatonga ny fidinan'ny indostria hidina, ary ny indostrian'ny gana dia ao anatin'ny fatiantoka manerana ny faritry ny indostria iray manontolo. Tsy mitaky fitakiana ny fidinan'ny fiompiana akoho amam-borona, ary mihalefaka ny tsenan'ny methionine.
Raha fintinina, na dia nihena aza ny tahan'ny fanafarana methionine tato anatin'ny volana vitsivitsy, dia vao haingana no nitaterana fa ny orinasa methionine amerikana dia nampiato ny famokarana noho ny rivo-doza amerikana. Na izany aza, nitombo ny vokatra nataon'ny mpamokatra eto an-toerana, malemy ny teny nataon'ny mpanamboatra, malaindaina ny fiompiana akoho amam-borona, ary be ny famatsiana methionine ary fahalemena vetivety sarotra ovaina.
Fotoana fandefasana: Oktobra-26-2020
Sakafo biby, Kilasy Sakafo L-Threonine, L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Pharm, Farm kilasy L-Leucine,